Binance in aan bilowno Singapore sarrifka Fiat-crypto
Binance ayaa lagu wadaa in daaha sarrifka lacagta Fiat in lagu salayn doonaa in Singapore. CEO Changpeng Zhao ayaa sheegay in is-dhaafsiga cusub hadda ka yar yahay wajiga martiqaad-kaliya ah imtixaanka beta laga bilaabo on September 18-, 2018.
Waa xusid mudan in maamulka Singapore ma nidaaminaya is dhaafsi crypto sababtoo ah ma crypto la aqoonsan yahay sida curdan tahay sharci ee dalka, laakiin is-weydaarsiga waxaa si kastaba ha ahaatee loo baahan yahay in uu u hoggaansamo AML iyo xeerarka CFT.
Shaki kuma jiro ama qalad ah oo ku saabsan Binance isagoo is-dhaafsiga cryptocurrency waaweyn ee sannadkii la soo dhaafay. CEO-dhaafsiga ee, Changpeng Zhao (Cz on Twitter), ayaa Sabtidii ku saabsan Binance ugu dhakhsaha badan ay u bilowdo tijaabada ah lacag beta live ah sarrifka Singapore Fiat, laga bilaabo 18-Sept. This feature is expected to be available based on invitation only. This tweet is coming on the second day (ka mid ah saddex) shirwaynaha Cumberland, ka dhacaya Singapore.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo is dhaafsi Cryptocurrency ugu inta badan ku xiran tahay iyo Citaah ama BTC sida hantida saldhig for hantidooda a, dagalka ka mid ah calaamadihii crypto aaday kooxda Fiat hubaal noqon doontaa tallaabo kale oo weyn dhinaca ansixinta crypto.
Day 2: @ JamesRadecki32 laga bilaabo off Hakadyada #2 la @tylerwinklevoss iyo @cz_binance on dhaafsi crypto. @GeminiDotCom @tylerwinklevoss @ApoloOhno @arrington @tusharjan_ @MatthewRoszak @missbitcoin_mai #cumberlandsummit #crypto #Seeraar pic.twitter.com/Sk2XuU1Bhc
fuula Uber Argentina ayaa bixin la BTC, tan iyo kaararka deynta la mamnuucay
Argentina ayaa mamnuucday isticmaalka kaararka deynta wax gadashada raacid Uber, Uber jawaabay aqbalayaan Seeraar sida bixinta raacid. Tan iyo markii ay gobolka soo saaray amar mamnuucaya kaararka deynta sida bixinta Uber ee 2016, dadka isticmaala ay awood u isticmaali Seeraar via kaarka debit Xapo ah.
Sida laga soo xigtay Madaxweynaha Seeraar Latam iyo CEO of RSK Shaybaarka, Diego Gutierrez Zaldivar "In dadka isticmaala Uber guud waa heer sare ah oo aqoon ku saabsan technology iyo ka badan u nugul Seeraar fahamka iyo isticmaalka, cabsi ku saabsan Seeraar inta badan ka yimaadeen dadka isticmaala dheeraad ah waxna qorin. "
Report Kraken Daily Market for 16.09.2018
$57.6M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
South Korean Wasiirka Maaliyadda:...